Support Call +86 536 8513092
akadhindwa T-hembe bhegi
nemitsetse T-hembe bhegi
T-hembe bhegi iri mupumburu
Marara bhegi iri mupumburu
Star chisimbiso Garbage Bag
Food chiputiriso bhegi
Fruit uye Vegetable Bag
100% Compostable PBAT & Corn Vanonyanya kudya Bag
D2W & EPI yokuvirisa Degradable Bag
Loop mubato Itai Bag
Nzira Detective Water nemhute Transmittance Kurapwa Packaging
by pamusoro 18-06-13
Nzira rokuongorora mvura mhute permeability zvokurapa mumasaga Medical masaga aro chiedza uremu, mukuru simba, chisimbiso zvakanaka uye kumanikidzwa nezvimwe zvakanaka, iri zvishoma nezvishoma kutsiva zvokurapa mabhotoro girazi, iri zvinowanzoshandiswa nemumuromo zvikukutu mushonga uye mvura mushonga kavha muchikwata. Wate ...
Sei nzungu ngazvichengetedzwe
Sei nzungu kurichengeta? Kunyanya kumaodzanyemba okunze ndiko nyoro, bhegi akazarura, ari kuvhara zviri nyore chaizvo uye nyore chaizvo kuna kumiswa, nzungu uye moisturizing nyore akanamatirana pamwe chete nguva ino kuisa nzungu kupinda zuva dzokupisa zuva, anofanira kuva Climate yakanaka chaizvo, mukuru tembiricha ...
Kugadzirwa mupunga mumasaga muenzaniso vanofanira kuteerera chii?
Imhandoi mashoko anofanirwa kuverengerwa mukati mupunga mumasaga kuti ndikwane National mureza? Rice zvikwama ekuronga pfungwa apo ratova nyika zvokudya indasitiri iri rinoda chaizvo, ticharamba sezvingatarisirwa kunyatsoteerera. Tine zvakawanda zvakafanana ruzivo pamusoro kavha mupunga Vacuum mumasaga inclu ...
Musatsiva munharaunda iri pfungwa kuti vakawanda mudzimba SMEs vave vachinamatira. On May 15th, 2018, pasi utungamiriri Director of Bureau of Commerce pakati Wei Fang City uye vatungamiriri Xiashan District Science and Technology Bureau, varikutonga mukuru Federation -...
Wellform kavha Group Co., Ltd. (WPG) rave mukugadzira uye Marketing mhando dzose anodzivirira, kuchinja kavha uye kudhinda zvinhu kwemakore.
Nzira Detective Water utsi wokushandura ...
Kugadzirwa mupunga mumasaga muenzaniso vanofanira kubhadhara ...